चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मानवबारे अझै आशंका ! रुसले छानविन गर्दै – Newsrara
न्यूज रारा February 7, 2019
मस्को । सामान्यज्ञान तथा हाजिरीजवाफमा प्रायः सोधिने प्रश्न हो– चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्ने मानव को हुन् ? वर्षौंदेखि एउटै जवाफ हुने गरेको छ– नील आर्मस्ट्रंग । सामान्यज्ञान तथा हाजिरी जवाफमा सोधिने यो प्रश्नको जवाफ परिवर्तन होला त ? रुसले थालेको अनुसन्धानप्रति चासो राख्दै धेरैको मनमा यो प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।